Farmaajo oo u safray Jabuuti | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo u safray Jabuuti
Madaxweynaha ayaa Madaxda dalalka IGAD hor dhigi doona dacwada DF ee faragelinta Kenya taasoo ay u gubisay Ra'iisul Wasaaraha Suudaan Cabdalla Hamdok oo ah gudoomiyaha Ururka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Farmaajo ayaa Maanta ka dhoofay dalka, isagoo kusii jeeda Jabuuti, oo berri ka furmi doono Shir IGAD ka yeelanayso xiisadda diblomaasiyasadeed ee Kenya iyo Soomaaliya.
Farmaajo ayaa la filayaa inuu madasha shirka geeyo dacwad ay dowladdiisa ka gubisay dhawaan Kenya, oo ay ku eedeysay faragelin joogto ah arrimaheeda gudaha, gaar ahaan Jubbaland.
IGAD ayaan la ogeyn go'aanka ay kasoo saari doonto xiisadda labada dal, oo gaartay meeshii ugu hooseysay kadib markii dowladda Farmaajo u yeertay Safiirkeeda Nairobi, iyadoo diblomaasiyiinta Kenya lagu amray inay uga baxaan Muqdisho 7 maalmood.
Kenya ayaa kamid ah dalalka Ciidanka ka jooga Soomaaliya, kuwaasoo dowladda ka caawiya dhanka amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab oo mudo 10 sano uga adkaan la'yihiin.